HIM | Health in Myanmar » 2013 » April
အသဲရောင် (ဘီ) ချွေးကနေ ကူးနိုင်သည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, နည်းလမ်း, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ချွေး နဲ့ မျက်ရည်ကနေ HIV ကိုမကူးစေပါ၊ ဒါပေမဲ့ အသဲရောင် (ဘီ) ကူးစက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး သတင်းတပုဒ် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်က ထွက်ပါတယ်။ Hepatitis B အသဲရောင် (ဘီ) ပိုးဟာ ချွေးကနေလည်း ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ပါတယ်။
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmarno comments | Tags: AIDS, HIV, ကွန်ဒုံး, အကူအညီ, ဆေးဝါး
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar2 comments | Tags: STD, ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မိခင်လောင်းဟာ ကိုယ်ဝန်စောင့်ရှောက်မှု လုပ်တုံးက စစ်ဆေးဘို့လိုမှာတွေ စုံစေ့အောင်စစ်ထားလို့ ကူးစက်ရောဂါ ဘာမှမရှိရင် တမျိုးဖြစ်မယ်။ တကယ်လို့ အသဲရောင် (ဘီ)၊ (စီ) နဲ့ HIV ရှိနေရင် တမျိုးလုပ်ရမယ်။ STD လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ရှိရင်လဲ တမျိုးစီစဉ်ထားရမယ်။
မန်ယူနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ ဘောလုံးကစားပွဲ HIV ဝေဒနာသည်နဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းတွေကို လှူမည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, ရန်ပုံငွေ, အကူအညီ
HIV ဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းတွေကို လှူဒါန်းဖို့ အတွက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားသမားဟောင်း ၄ ယောက်ပါဝင်တဲ့ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ အကြောင်း ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်-ကျမက စပါမည်၊ HIV ကိုတားနိုင်သည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, နည်းလမ်း, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လှုံ့ဆောင်ရေး (ကင့်ပိန်း) ဟာ “It Starts With Me; We can stop HIV ကျွန်တော်-ကျမက စပါမည်၊ HIV ကိုတားနိုင်သည်” ဖြစ်ပြီး၊ Terrence Higgins Trust အဖွဲ့ကနေ ကူညီ ထားပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့ အုပ်စုတွေကို အနည်းဆုံး ၁၂ လမှာ တခါ ဆေးစစ်ဘို့ တိုက်တွန်း ပါတယ်။
ကလေး ရစေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
Author: HimBur | Category: Myanmar, News1 comment | Tags: ကလေး, ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး
အမျိုးသား ဘက်က ချို့ ယွင်းချက် ၄၀% နှင့် အမျိုးသမီး ဘက်က ၄၀% ဖြင့် ဆတူ ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာချက် တစ်ရပ်က ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အကြောင်းအရင်း မသိဘဲ မြုံနေခြင်း ကတော့ ၂၀% ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
Myanmar predicted asawinner in the US aid sweepstakes
Here is an article in which Myanmar is predicted asawinner in the new US aid budget. This may include an increase to $10 M annually for HIV. More than in Indonesia! Jamie ++++++++++++++++++ Which countries are winners and losers in Obama’s 2014 aid budget? Lorenzo Piccio Devex5April 2013 Last week, the […]
သားအိမ်တွင်းထည့် ပစ္စည်းများနှင့် လွဲမှားသော အယူအဆများ
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါး1 comment | Tags: STD, ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး
သုတေသနပြု စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် အမျိုးသမီးများစွာမှာ သားအိမ်တွင်း ကိရိယာ၏ သန္ဓေတား သောက်ဆေး များထက် ပိုမိုထိရောက် မှုရှိပုံ၊ လိင်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ ခံစားရနှုန်း ပိုမိုနည်းပါးပုံတို့ကို မသိရှိကြကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ဆိုသည်။
Sentinel surveillance report is out
The new sentinel surveillance report is out. The Figure 23 on page 28 is encouraging. And Section 4.5 beginning on page 17. This needs to be followed year by year. Enjoy reading it, Jamie ++++++++++++++++++ http://www.aidsdatahub.org/dmdocuments/HSS_2012_Myanmar.pdf?utm_source=HIV%2FAIDS+Data+Hub+Subscribers&utm_campaign=db96eb2a8e-Myanmar+Data+Alerts&utm_medium=email
မိခင်မှ သန္ဓေသားသို့ HIV ပိုး မကူးစက်နိုင်ရေး HIV စစ်ဆေးနိုင်ရေး ဆရာဖြစ် သင်တန်း ပို့ချ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, ကလေး, ပညာပေး, အမျိုးသမီး
သင်တန်းသို့ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ၂၈ မြို့နယ်မှ မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဦးစီး ဌာနမှူးများ၊ မြို့နယ် သူနာပြု ဆရာမကြီးများနှင့် ကျန်းမာရေး မှူးများ၊ INGO အဖွဲ့အစည်းများမှ စိတ်ပါ ဝင်စားသော စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်သည်။